192.168.8.1 - Ukusetha i-TP-Link Router
I-router ibhokisi elinikeza ama-PC amaningi, ama-smartphones, nokunye okuningi ukujoyina inethiwekhi efanayo. Ngokuvamile, i-router ijoyinwa ukusuka lapho iye kwimodemu ukuhlinzeka nge-Intanethi exhuma kunoma iyiphi igajethi exhunywe ku-router. Le manuwali izama ukukusiza ngesikhathi sokuqala ukusethwa kwe-TP-Link Router.
Esitsheni ungahle ube nezinto ezimbalwa:
Ukunikezwa kwamandla kweshaja yomzila
Intambo ye-USB (okwenzelwe okumbalwa)
I-disc yomshayeli (okwenziwe okumbalwa)
Intambo yenethiwekhi (yamakhemikhali ambalwa)
Ukusetha i-TP-Link Router
Uma uthenge i-TP-Link Router yakamuva, ngakho-ke ukumisa i-router nokuyisetha kulula kakhulu. Ungazikhandla usethe umzila omusha we-TP-Link Wi-Fi futhi ungayisebenzisa.
Note: Ukuxhumanisa ne-inthanethi, i-router kufanele ixhunywe ku-jack yedatha noma kwimodem esebenzayo.
Ukusetha i-TP-Link Router entsha inamathele kulo mhlahlandlela
Shintsha irutha bese uxhume ikhompyutha yakho ku-router ngekhebula le-Ethernet.
Uma uxhumekile, vakashela isiphequluli sewebhu bese uya ku- www.sisoft.net Noma i-192.168.0.1
Setha iphasiwedi yokungena ngemvume ye-router ngokuyibhala kabili. Kungcono ukuyigcina kuphela– “admin”.
Shaya ku-Ake siqale / ungene ngemvume.
Ngokushesha, landela imiyalo eku-inthanethi futhi ulungiselele i-Intanethi neNethiwekhi engenantambo ngokukhetha kokusetha kwe-Swift.
Bhala igama (le-SSID) leNethiwekhi engenantambo emkhakheni futhi, bese usetha ukhiye wokungena ukuze uvikele amanethiwekhi we-Wi-Fi.
Ngakho-ke, ungayiqeda inqubo, uma usujoyine i-Wireless Connection yi-SSID nge-password.
Cisha i-router, imodemu ne-PC.
Xhuma imodemu ethekwini le-WAN le-TP-Link router ngekhebula le-Ethernet; xhuma i-PC ethekwini le-LAN ye-TP-Link ngokusebenzisa ucingo lwe-Ethernet.
Shintsha i-router ne-PC okokuqala nemodemu elandelayo.
Ngena ngemvume ku-web-based management page web router. ngicela ubheke ku
Lungiselela uxhumano lwe-Typeof WAN
Ekhasini labaphathi be-router, cindezela Network > I-WAN ekhasini lewebhu ngakwesobunxele:
Guqula Uhlobo Lokuxhumeka kwe-WAN lube yi-PPPoE.
Bhala igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-PPPoE enikezwa yi-ISP.
Cindezela u-Gcina ukonga izilungiselelo zakho, ngokuhamba kwesikhathi i-router izoxhunywa kwi-Intanethi ngemuva kwesikhathi esithile.
Lindela imizuzwana embalwa futhi uqinisekise imbobo ye-WAN ekhasini lewebhu leSimo, uma lembula ikheli elithile le-IP, elibonisa ukuxhumana phakathi kwe-Router neModem.
Uma lingekho ikheli le-WAN IP futhi kungekho ndlela ye-inthanethi, vele wenze i-Power Cycle njengoba ingezansi:
1. okokuqala Cisha imodem ye-DSL bese ucisha i-router ne-PC, futhi uyigcine imizuzu emibili;
2. Manje vula imodem ye-DSL, linda kuze imodemu isethwe, bese uvula i-router ne-PC yakho futhi.
Ngekhebula le-Ethernet xhuma kurutha okhiye we-TP-Link router yakho ngamachweba abo we-LAN. Wonke amachweba we-LAN angeziwe ku-TP-Link N router manje azonikeza ukufinyelela kwe-Intanethi kumadivayisi.
Izigaba Ukusetha i-Router Imeyili kwemikhumbi